Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mmachibido njem ọhụrụ US n'ihi iyi egwu Omicron
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbochi njem ọhụrụ na-abịa mgbe erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) kwuputara ikpe mbụ US nke ụdị Omicron na California na onye si South Africa bịa na Nọvemba 22.
Ndị ọchịchị US akwadola ịkpọsa mmachi njem COVID-19 ọhụrụ, nke ga-achọ nnwale na-adịghị mma n'ime naanị otu ụbọchị njem maka ndị mba ọzọ niile, gụnyere ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi.
New njem mgbochi na-abịa mgbe Ụlọ Ọrụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) Ekwenyere ikpe mbụ US nke ụdị Omicron na California n'ime onye si South Africa bịa na Nọvemba 22.
Onye njem ahụ gbara ọgwụ mgbochi zuru oke mechara nwalere ihe dị mma na Nọvemba 29 mgbe ọ nwesịrị mgbaàmà dị nro.
"CDC na-arụ ọrụ iji gbanwee usoro nnwale zuru ụwa ọnụ ugbu a maka njem ka anyị na-amụtakwu banyere ụdị omicron, " CDC Onye nkwuchite ọnụ Kristen Nordlund kwuputara na Tọzdee, na-agbakwunye na "iwu edegharịrị ga-ebelata usoro iheomume maka nnwale achọrọ maka ndị njem ụgbọ elu mba ụwa otu ụbọchị tupu ọpụpụ."
Ugbu a, US na-agọnarị mbata ndị a na-enyeghị ọgwụ mgbochi sitere na mba ndị ọzọ, ebe ndị butere ọgwụ mgbochi zuru oke nwere ike ịga America ma ọ bụrụ na ha bute ule COVID-19 na-adịghị mma emere n'ime ụbọchị atọ nke mbata. Nke CDC na-agbakwa ndị a gbara ọgwụ ume ka ha mee ule n'ụbọchị nke atọ ruo ụbọchị ise ka ha banyere US.
Dị ka akụkụ nke usoro ndị a ga-amalite ịmalite, CDC ekwuwapụtala na ọ na-arụ ọrụ na-abawanye onyunyo na ọdụ ụgbọ elu anọ nke mba ụwa, na Atlanta, New Jersey, New York na San Francisco, yabụ ndị isi nwere ike ịnye ule Covid maka ndị mba ọzọ. ndị njem.
Iwu njem njem, yana oku maka ndị America niile ka ha nweta ọgwụ mgbochi COVID-19 ma nwee ogbugba agba ma ọ bụrụ na ha gafere afọ 18 ma nwee ọgwụ nke abụọ ha karịa ọnwa isii gara aga, ka emebere iji nyere aka gbochie mgbasa nke ụdị ọhụrụ a na gbochie US ka ọ ghara ịkabiga ya ókè n'ihi oke ọrịa ọhụrụ.
The Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) chọpụtara Omicron dị ka “iche iche echiche” n'izu gara aga, ka achọpụtara ya na mba 20.
N'akụkụ aha ya, nke WHO kpọrọ oku maka nkwalite nleba anya na nnwale, yana usoro nchekwa COVID-19, dị ka iyi mkpuchi na ndọpụ uche ọha.
Wendy Rajabpour ekwu, sị:
Ọnwa Iri na Abụọ 10, 2021 na 17:10
Ọ na-amasị m ịgụ isiokwu ndị ị na-ekwu. Ịbụ na ụlọ ọrụ njem, ọ dị m mkpa ka m mara.